Goobaha Khadka Tooska ah ee Estonia - Koodhadhka Lacagta ee Khadka Tooska ah ee Khadka
Loading ...In kasta oo xaqiiqda ah in sanadihii ugu dambeeyay khamaarka Estoniya ay ahayd inuu soo maro daqiiqado badan oo adag - waa dhibaatada dhaqaale ee adduunka iyo adkeynta sharciga dowladda, iyo daqiiqadaha kale ee xun - wuxuu sii wadaa inuusan si fiican u shaqeyn oo keliya, laakiin sidoo kale inuu horumariyo .
Dabcan, dhammaan arrimahan, marka la yiraahdo, waxay gacan ka geysteen qaar ka mid ah "nadiifinta" safka hawlwadeennada khamaarka. Milkiilayaasha casinos yaryar waa inay xiraan sababtoo ah faa'iido la'aan, laakiin guryaha khamaarka weyn, liddi ku ah, waxay sii kordhiyeen dakhligooda. Ku darsaday tan iyo furitaanka casino online ah.
Guusha ugu weyn ee reer Estonia waxay ku raaxeysataa roulette, laakiin wax aan sidaas uga sii fogeyn ayaa ah turub iyo mashiinno lagu ciyaaro. Waxaa laga yaabaa in halkan laga dhigo in la sameeyo bakhtiyaanasiibka gobolka iyo Eesti Loto. Ka dib oo dhan, sida laga soo xigtay tirakoobka, waxaa loo ciyaaraa ku dhowaad 80% muwaadiniinta Estonia.
Inkasta oo ay Baltic wax iska sheegto oo jecel yahay madadaalada khamaarka, laakiin Dakhliga ugu badan ee dakhliga soo gala ee Estonia ayaa ka yimaada dalxiisayaasha . Tartan dhexdooda ah Finnishka, juquraafi ahaan darisnimada labada dal. Dhawaan, si kastaba ha noqotee, waxaa jira ujeedo muujinaysa in casinos-yada maxalliga ah inta badan martida yihiin Ruushka, tiradooda oo dhowaan la mid noqon doonta Finns.
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Dalxiiska Estoniya sanadka celcelis ahaan waxaa booqda qiyaastii 800,000 oo qof oo ku nool Finland, isla waqtigaasna waxay ku qaateen 1.6 milyan oo habeen halkan. Kaalinta labaad waxaa hubaal ah in Ruushka uu ka dambeeyo Finishka laba laabmay. Waa cadaalad in la dhaho tirooyinkan kuma jiraan kuwa la joogay asxaabtooda ama eheladooda, imanaya Estonia hal maalin oo kaliya ama halkan u imaad safarada safarada.
Marka laga hadlayo da'da Rushka ka yar Finnishka iyo Iswidishka. Marka la barbardhigo dalxiisayaasha Scandinavia, Ruushka ayaa qashin badan. Waxay doortaan maahan oo kaliya hudheelada qaaliga ah, laakiin sidoo kale kuwa ay qasab tahay inay jiraan casino. Lacagta ay ka tagayaanna waxay aad uga badantahay kuwa deriskooda ah waqooyiga iyagoo rajeynaya inay ku guuleystaan ​​abaalmarin weyn.
Kasiiniyadihii ugu horreeyay waxay ka muuqdeen waddanka wax yar kadib markii ay joogsadeen jiritaanka Midowgii Soofiyeeti iyo jamhuuriyadihii hore waxay qaateen xorriyad. Xawaaraha horumarka ganacsiga khamaarka ee Estonia waa uun cajiib. Gaar ahaan markii dalku xubin ka noqday EU. Hadda masuuliyiintu waxay soo bandhigeen wax ka beddel adag oo lagu sameeyo sharciyada xukuma ganacsiga khamaarka, laakiin, si aan caadi ahayn, waxay isaga ugu tegayaan oo keliya faa'iidada.
Way adag tahay in la rumaysto, laakiin afar sano ka hor, Estonia waxay lahayd qiyaastii 200 khamaar oo kala duwan (casinos, hoolalka mashiinka, iwm). Waxay lahaan jireen hantidan oo dhan oo ah 19 qof, kuwaas oo uu ka dhexeeyo tartan aad u culus. Cimilada maalgashiga soo jiidashada leh ayaa ugu dambeyntii abuurtay xaalad aysan ciyaartoydu si fudud ku dhaafin dhammaan casinos-yada. Isla muddada sharci-dejinta kuma jiraan wax tallaabooyin xaddidan ah. Qof kasta oo raba inuu furo xarun khamaar ayaa ku sameyn kara Estonia dhib la'aan. Markii wax-ka-beddelka lagama-maarmaanka ah laga aqbalo suuqa ayaa ahaa ciyaartoydii waaweynaa oo tartamayaashoodii yaraa lagu qasbay inay baxaan.
Waxaan jeclaan lahayn inaan ogaanno sida xariifka ah ee mas'uuliyiinta Estonia ay u soo direen waxtarka dhammaan muwaadiniinteeda iyagoo ku tiirsan madadaalada khamaarka. Dhamaan casinos-yada waxay bixinayaan sicirka canshuurta oo aad u sarreeya, halka inta badan dakhliga lagu soo rogay horumarinta dhaqanka (46%). Inta soo hartay waxaa loo qaybiyaa inta u dhexeysa Laanqayrta Cas iyo maalgelinta barnaamijyada kuu oggolaanaya inaad gargaar u fidiso kuwa u baahan, oo ay ku jiraan carruurta.
Qalabkan isku midka ah wuxuu abaabulay mashaariic dhaqameedyo badan iyo dhacdooyin: buugaag la heli karo, xaflado, filimka laga saaray iyo waxyaabo kaloo badan. In kasta oo xaqiiqda ah in Estonia iyo meelahan laga maalgeliyo miisaaniyadda gobolka, haddana waxaa badanaa loo isticmaalaa lacag laga helo ka-goynta canshuuraha khamaarka. Si kale haddii loo dhigo, ciyaartooyda lacagta uga tagta khamaarka, oo maalgeliya inta badan mashaariicda dhaqanka iyo waxqabadyada, iyo lacagaha dheeraadka ah ee ka soo baxa khasnadda ayaa ah waxyaabo kale oo muhiim ah in la sameeyo.
Intaad ku ciyaareyso casino reer Estonia nin walboo kara, waxaa jira shuruudo gaar ah booqashadeeda. Marka, haddii aad go'aansato inaad u tagto si aad u qanciso dareenka farxadda, ha ilaawin inaad la timaaddo baasaboor ama dukumiinti kale oo kuu oggolaanaya in lagu aqoonsado. Waqtiga booqashadiisa xarunta khamaarka waa inaad ahaataa ugu yaraan 21 sano. Albaabka laga soo galo martida kastaa waxay u gudubtaa diiwaangelin fudud.
Waxaa la yaab leh, markii xaddidaadda da'da xitaa carruurtu wali ku biiri karaan khamaarka oo waqti la qaadan karaan qoryaha darandooriga u ah maraakiibta dalxiiska ama rakaabka. Ku xaddidan carruurta iyo sharadka ugu sarreeya, oo ah 10 euro.
Waxaa jira shuruudo cayiman iyo meelaynta xarumaha khamaarka. Waxay ku yaalliin dhisme gooni ah, iyo qayb ka mid ah dhismaha hudheelka, madadaalada ama xarunta dukaamaysiga. Shuruud ayaa ah wax soo saar gooni ah.
Laga bilaabo 2012, hay'adaha khamaarka waxaa loo oggolaaday inay kordhiyaan tirada mashiinnada hoolalka khamaarka illaa 40 gogo '. Dhinaca kale, waxaa suurtagal ah in lagu ballaariyo baaxadda madadaalada dhinaca kale - dharbaaxo daran oo ku saabsan khamaar yar, oo aakhirkii isu dhowaaday, aan awoodin inuu u babac dhigo tartanka. Sanadihii la soo dhaafay, tirada casinos waxay ku dhowdahay kalabar, laakiin tani saameyn kuma yeelan soo booqdayaasha.
Waxaas oo dhan waxaa sidoo kale jira waxyaabo lagu daray. Yaraynta tirada casinos waxay hoos u dhigtay tirada tirada dadka ku dhibaataysan khamaarka. Liiska dadka loo diray milkiilayaasha waaxda cashuurta iyo canshuuraha. Tan ugu xiisaha badan ayaa ah in qofna uusan kugu qasbin in uusan ku soo dari doonin - waa mid iskaa wax u qabso ah waxayna kuxirantahay rabitaanka ciyaaryahanka. La shaqeynta liistada bangiyada, dhaqdhaqaaqyada raadraaca lacageed ee akoonnada khamaarayaasha xad-dhaafka ah oo aan u oggolaanayn inay amaahiyeyaal suurtagal ah.
Estonia waxaad ka heli doontaa noocyo kala duwan oo casiin ah . Tanina ma khusayso oo keliya caasimadda. Qeybaha ugu booqashada iyo ugu weyn ee casinos ayaa ku yaal, marka lagu daro Tallinn, Narva, Tartu, Pärnu iyo Jõhvi.
Estonia - tani waa dalxiis weyn oo ku habboon taageerayaasha nasashada xasilloonida iyo dabeecadda quruxda badan. Tallinn qadiim ah, oo caan ku ah meelaha loo yaqaan 'Pärnu iyo Saaremaa' - meelahan, iyo sidoo kale kuwa kale oo badan ayaa soo jiita dalxiisayaasha adduunka oo dhan si ay u cabbiraan waqtiga, dhismayaasha dhismaha iyo madadaalada. Suurtagal ma tahay Estonia in la aado khamaarka ama lagu ciyaaro khamaarka internetka? Aan aragno!
Shuruucda Estonia ee khamaarka - macluumaad taariikhi ah laga bilaabo 1990 ilaa 2017;
Sharciyada Estonia ee ku saabsan khamaarka - sooyaal taariikheed
Estonia waxay xornimada ka qaadatay Midowgii Soofiyeeti 1991, laakiin tan iyo dabayaaqadii 80-yadii qarnigii XX dalka waxay bilaabeen inay horumariyaan warshadaha ciyaaraha. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee horumarkan, iyo sharciyada sharciga ah, waxaan ku soo bandhigeynaa qaabka miiska.
1989 Markab "Georg Ots" wuxuu noqday hoolka ugu horeeya ee ciyaarta, halkaas oo ay lacag ugu ciyaaraan. Kasiinadii ugu horreysay ee hudheelka "Palace" ee Tallinn.
1990-1994 Furitaanka shabakadaha noocan oo kale ah ee loo yaqaan casinos Casino, Olympic Casino, Kristiine Casino, Play-In Casino Group. Gobolka ayaa bixiya shatiyada.
1995 Sharciga N 580 "Khamaarka". Waxay ku shaqeysaa sidaas isbeddello badan iyo wax ka beddelid. Xuquuqda Abaabulka Gobolka, oo ruqsad siin kara shirkadaha gaarka loo leeyahay. Hubso inaad u hesho rukhsad nashaadaadka khamaarka (sida hawlo kala duwan - muddo 10 sano ah) iyo rukhsad aad ku abaabusho ciyaaro nasiib (xaq u leedahay inaad ka furato xarun khamaar meel gaar ah - muddo 5 sano ah).
1997 Xayeysiinta khamaarka laakiin ku xayeysiinta goobaha khamaarka. Furitaanka Ururka hawl wadeenada ciyaaraha khamaarka Estonia.
2008 Adkaynta sharciga "Khamaarka" - had iyo jeer kaar aqoonsi, dhammaan martida waa la hagaajiyaa, ciyaaryahanka ayaa laga yaabaa, codsigiisa ah inuu mamnuuco khamaarka isaga (ha ka ilaaliyo Gamblers). Is-xadidnaanta khamaarka Estonia waxay dejin kartaa Guddiga Canshuuraha iyo Canshuuraha.
2009 Sharciyeynta khamaarka khadka tooska ah - ruqsad siinta sharci yaqaanada iyo ka hortagga sharci darrada ah. Khadka tooska ah ee loo yaqaan 'casino' waa inuu ahaadaa mid loogu talagalay dadka waaweyn oo keliya, iyo sidoo kale in la aqoonsado aqoonsiga iyo meesha uu deggan yahay ciyaaryahanka. Hawlwadeennada ajnebiga ah ee sharciyeynta hawlahooda waxay heshiis la geli karaan hawlwadeennada maxalliga ah, kuwaas oo iyaguna ku shaqeeya qaab sharci ah dhulka Estonia. Dhamaan boggaga kale ee ajaanibta ah ee sharci darada ah waxaa xayiray shirkadaha ka shaqeeya shabakadaha, waqtigaan la joogo liiska laga mamnuucay howlwadeenada shisheeye ee Estonia ayaa maray 1000.
Khadka tooska ah ee internetka - in xaqiiqda sharciyadan macnaheedu yahay ciyaaryahanka?
In Estonia, marka la eego khamaarka waxaa loo isticmaalaa waxa loogu yeero nidaamka kormeerka xakamaynta - taas oo ah, khamaarka lama mamnuuco, laakiin wuxuu ka hooseeyaa 100% oo ay maamusho gobolka. Tani waxay khuseysaa khadka tooska ah sida casinos-ku-saleysan dhulka iyo casinos-ka internetka ee internetka.
Khamaaris shisheeye oo aan shati ka haysan Estonia, raadadka iyo baloogyada. Haddii casino aan lagu darin "liiska madow", markaa halkaas ayey aadi kartaa wakhti kasta ka dibna faa'iidada wax soo saarku waxay noqon kartaa mid dhibaato leh.
Ciyaaryahanku waa inuu noqdaa da 'sharci ah. Xogteeda waxaa lagu keydiyaa keyd gaar ah oo ciyaartoy ah.
Koontada la raadsado iyo guuleysiga - lacagta waxaa loo wareejin karaa oo keliya koontada lacagta dhigata (tan waxaa lagu sameeyaa iyadoo laga soo horjeedo xaqiiqda ah in "lacagta la dhaqay") la sameeyay.
Kolywan, Rewal, Revel - sidaas ayaa loogu yeedhay Tallinn kahor. Magaalada ugu yaraan 900 oo sano. Magaca caasimada ayaa macnaheedu noqon karaa “Dekedda deenishka”, “magaalada jiilaalka” ama si fudud "quful".
Tallinn - waa deked caan ah oo reer Yurub ah iyo astaan ​​dhaqameed adduun - badanaa sababtuna tahay Magaaladii hore . Qeybtaan magaalada waxay ilaalisay dhismooyin badan XI - XV qarniyo, oo ay kujiraan tiro munaarado ah.
Taariikhda dalku waxay si dhaw isugu xidhan yihiin taariikhda Ruushka. Marna Estonia kamay mid ahayn USSR, laakiin had iyo jeer waxay ku dadaashaa madax-bannaanida. Sannadkii 1991, dalku wuxuu qaatay xorriyad.
Tallinn - marka loo eego heerarka caasimadaha, magaaladu aad ayey u yar tahay, kaliya 430,000 ayaa deggan. Si kastaba ha noqotee, waxay ku saabsan tahay 40 "casino". Kasiinooyinka Estonia waa aasaas kasta oo khamaar - naadi yar oo leh mishiinno dheellitir ah, qol yar oo hudheelka ku yaal oo leh miisas yar oo ciyaaro ah iyo, dabcan, guryo waaweyn oo khamaar oo heer sare ah
Magaalada caasimada ah ee Estonia, had iyo jeer waa dalxiisayaal aad u tiro badan - kani waa badiyaa dadka Finnishka ah waxayna Iswidishku ka yimaadaan Finland iyo Iswidhan. Taasi waa sababta shaqaalaha casino ay caadeysteen martida oo ay u awoodaan inay u adeegaan.
Khamaarka ugu weyn ee magaalada - Reval Park markaas ka dib . Tani waa nooc (sida ugu macquulsan erayga) machad leh hudheel wanaagsan iyo hoolal ciyaaro aad u wanaagsan.
In Reval Park markaas ka dib ilaa boqol naadi, waxaa jira roulette, baccarat, blackjack iyo qolka turubka. By habka, in Estonia lagu qabtay dhowr tartamada turub caalami ah, si martida iyo dadka magaalada deggan ay caadeysteen in ay hawlaha noocan ah.
Bandhiga ugu wayn waxaa iska leh magaalada ee Olympic Madadaalada Kooxdu waa , oo sidoo kale xarumo ka leh dalal kale oo Baltic ah iyo Poland, Slovakia iyo Belarus.
Galitaanka casino waxaa loo oggol yahay dadka ka weyn 21 sano, lambarka labiska looma oggola - marka laga reebo "sportivkah" lama oggolaan doono.
1. Magaalada Old meesha ay tahay inaad marka hore tagto. Asalka taariikhda qaybtan magaalada waxay aadeysaa qarnigii 13aad. Haddii aad isku aragto adduun kale: dhagaxa daa'imiska ah ee hoostiisa, jidadka cidhiidhiga ah ee raaxada leh, dhismayaasha dhabta ah, ee lagu ilaaliyay quruxdiisa asalka ah.
At Xaafadaha Magaalada waa makhaayado badan, makhaayado iyo cayn kasta oo dukaanno xiiso leh, dukaamo. Fikrad aad u fiican inaad ku socotid dusha sare ee Old Town, Vyshgorod , kaas oo bixiya aragti aan caadi ahayn ee magaalada iyo badda.
2. Kick-in-de-Kök: mid ka mid ah munaaradaha ugu caansan magaalada qadiimiga ah, oo ay ku wareegsan yihiin - raali noqo tautology - gidaar qaro weyn. Magaceeda waxaa loo turjumay Ka fiiri jikada ” - maxaa yeelay runti way iska cadahay in dadka lagu diyaariyo guryaha u dhow.
Kiek in de Kok ku dhowaad 40 mitir oo dherer ah, dhumucdiisuna waxay ahayd darbiyada - 4 mitir.
3. Kadriorg: hidaha caanka ah ee Boqortooyada Ruushka - qasriga Peter I. Dhismuhu wuxuu bilaabmay 1718, hadda waa matxaf ku yaal dhismaha.
Kadriorgtakzhe waxaa loogu yeeraa Ekaterinentalem - “Dooxada Catherine.” Qasriga waxaa ku wareegsan jardiin qurux badan oo leh ilo, shimbiro iyo ubaxyo.
3.0.1 Sharciyada Estonia ee ku saabsan khamaarka - sooyaal taariikheed
3.1 Khadka tooska ah ee internetka - in xaqiiqda sharciyadan macnaheedu yahay ciyaaryahanka?
bovegas no code deposit bonus 2020